Slicker borosy mpanamboatra & mpamatsy | China Slicker Brush Factory
Borosy azo alika alika lehibe alika
1. Borosio moramora amin'ny volon'ny fitomboan'ny volo. Ny volom-borona manala volo volo, manafoana ny kitrokely, knot, dander ary loto voafandrika.
2. Ny tsimatra azo sintomina dia mamonjy anao amin'ny fotoana fanadiovana sarobidy. Rehefa feno ny pad dia azonao atao ny mamoaka ny volo amin'ny alàlan'ny fanosehana ny bokotra ao ambadiky ny pad.
3. Borosy vita amin'ny alika lehibe azo esorina miaraka amina fehin-tànana marefo, tsindrio fotsiny ny bokotra eo an-tampon'ny borosy mba hamotsorana mora volo. Azo antoka fa hanampy amin'ny fanandramana fikolokoloana sy mahafinaritra ho an'ny alikanao izany.
Borosy miloko marevaka alika
1.Dush fikolokoloana slicker borosy manana lohany plastika matevina miaraka amina kalitao vy tsy misy fangarony, afaka miditra lalina ao anaty palitao izy mba hanala akanjo malalaka.
2.Ny fikolokoloana alika fikosoham-bolo dia manala moramora ny volo volo, manala ny kitrokely, knot, mandehandeha ary loto voafandrika avy ao anaty ny tongotra, rambo, loha ary faritra marefo hafa nefa tsy manadidy ny hoditry ny biby fiompinao.
3.Ny alika fikolokoloana alika io dia azo ampiasaina amin'ny fluff-maina biby fiompy amin'ny hoditra mora tohina sy palitao tsara landy.
4. Mampitombo ny fivezivezivezy ary mamela ny palitao biby malefaka sy mamiratra. Ny fanaovana ny fanosorana ny biby fiompinao ho traikefa mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
5.Grafitra famolavolana ara-tontolo iainana dia manome fampiononana rehefa miborosy na firy na firy na firy ianao no manao mora ny fikolokoloana.
Borosy malefaka malefaka miampy roa sosona
1.Pet Slicker Brush dia manao asa lehibe amin'ny fanadiovana volo matotra, indrindra ao ambadiky ny sofina.
2.Mamora ihany koa izy io, izay ahazoana aina kokoa ho an'ny alika.
3. Ny borosy savily miovaova misy sisiny dia misintona kely kokoa ny volo, noho izany dia nesorina ny fihetsiketsiky ny alika mahazatra.
4. Ity borosy ity dia midina lavitra amin'ny volo mba hisorohana ny fikororohana.
Fanadiovan-tena ho an'ny alika
1.Izy borosy savily manadio tena ho an'ny alika ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, noho izany dia mateza be izy io.
2.Ny volon'ondry miforitra tsara amin'ny borosinay dia natao mba hidirana lalina ao anaty palitao ny biby fiompinao nefa tsy hikorontana ny hoditry ny biby fiompinao.
3.Ny borosin-tsolika manadio tena ho an'ny alika dia hamela palitao malefaka sy mamiratra ihany koa ny biby fiompinao aorian'ny fampiasana azy rehefa manotra azy ireo sy manatsara ny fivezivezy.
4. Amin'ny fampiasana tsy tapaka, io borosy manadio tena io dia hampihena mora foana ny fandatsahana ny biby fiompinao.
Fanadiovan-tena ho an'ny biby malefaka borosy
Borosy miloko saka alika hazo
1. Ity alika kitay alika kitay ity dia manala mora foana ny tsihy, ny fatotra ary ny kitrokely avy amin'ny palitaon'ny alikao.
2. Ity borosy ity dia borosy vita amin'ny alika vita amin'ny alika vita amin'ny alika vita amin'ny alika vita amin'ny alika vita amin'ny alika vita amin'ny alika izay misy ny asa rehetra ho anao ary tsy dia miady saina loatra ho an'ny mpitaiza na ny biby.
3. Ity borosy alika malama ity dia misy volombava miasa amin'ny zoro manokana mba tsy hanakorohany ny hoditry ny alikao.